समाजको नीतिगत शोषण कसरी भैरहेको छ, बुझ्न जरुरी छ! « Media for all across the globe
समाजको नीतिगत शोषण कसरी भैरहेको छ, बुझ्न जरुरी छ!
भारतमा सामाजिक र विकासको मुलधारबाट पिछडिएका जातिहरुलाई समाज र विकासको मुलधारमा ल्याउने उदेश्यका साथ जातीय आरक्षण मात्र १० वर्ष सम्मको लागि भनेर उल्लेख गरिएको थियो। तर, राजनीति स्वार्थको कारणले गर्दा त्यो प्राबधान अझै निरन्तर चलिरहेको छ।
त्यो संविधानका जन्मदाता डाक्टर बाबासाहेव आम्बेडकर स्वयंम एउटा दलित समाजबाट हुनुहुन्थ्यो र सम्मानित विज्ञ व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। जो जाती र समाजको लागि भनेर उल्लेख गरिएको आरक्षण बाट समाजका पौचवालाहरुले त लाभ लिरिरहेकै छन्। तर, यथार्थ जरुरतमन्दको जीवन स्तरमा भने खासै परिवर्तन आएको र समाजको उत्थान भएको देखिदैन।
जस्ले लाभ उठाइरहेका छन, बरु दलित व पिछडिएका जाती भने पनि विगतमा पनि राम्रै अवस्थामा रहेका व्यक्तिले लाभ उठाइरहेको देखिन्छ। त्यो लक्षण नेपालमा पनि देखिन थालिएकोछ, नेताहरु र यथार्थ पीडित जातीजमाती समाजहरुले समय रह्दै बुझ्न जरुरी छ।
काठमाडौं जस्तो शहरमा दलितहरुले कोठा पाउन थाले भनेर खुशीले गदगद हुनुभन्दा पनि, आफ्नो समाजको नीतिगत शोषण कस्ले गरिरहेको छ। कसरी भैरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुर छ।
यदि राज्यले साच्चिकै सम्पुर्ण जनतालाई विभेदकारी रहित दृष्टिकोणबाट हेर्न चाहान्छ, र एउटौ सुत्रमा बाध्न चाहान्छ भने जातीय आरक्षण होइन, जात भित्र रहेको वर्गलाई अन्तरदृष्टिबाट हेरेर वर्गीय आरक्षण विधेयक पारित गर्नुपर्छ।
होइन भने नेताहरुले २७–२८ राज्यको खाका ल्याएर, सबैको हकअधिकार भन्दै आफू सत्ता आसिन हुन उदेश्य मात्र हुनेछ। जय चन्द्र सुर्य !